घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू आर्काडियाउज मिलिक बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
आर्काडियाउज मिलिक बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू। क्रेडिट: 90 ० मिनेट र फुटबल प्लेअर्सल्डहुडपिक्स
अन्तिम अपडेट गरिएको डिसेम्बर 26, 2019
एलबीले फुल स्टोरीको फुटबल प्रतिभाशाली प्रस्तुत गर्दछ उपनाम "Aro“। हाम्रो अर्काडियोज मिल्क चाइल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता लिएर आउँदछ।
आर्काडियाउज मिल्लिकको जीवन र उदय। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम, FPCP र लक्ष्य।
हो, सबैलाई थाहा छ दुबै स्कोर र लक्ष्यहरू सिर्जना गर्न उसको क्षमतालाई। जे होस्, केहि थोरैले हाम्रो अर्काडिउज मिल्लिकको जीवनीको संस्करणलाई विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
अर्काडियस मिल्क बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - पारिवारिक पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक जीवन
सुरू गर्दै, अर्काडियस क्रिस्टियान "अरेक" मिलिक फेब्रुअरी १ ​​28 1994। को २ XNUMX औं दिन पोल्याण्डको सिलेसियाको टाचि शहरमा जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्नो सानो ज्ञात आमा र बुबा बीचको मिलनबाट जन्मेका दुई छोरा मध्ये दोस्रो हुनुहुन्छ।
अर्काडियस मिल्क जन्म भएका बाबुआमाको बारेमा थोरै मात्र चिनिएको छ। छवि क्रेडिटहरू: PxHere र FPCP।
युरोपेली परिवारको उत्पत्तिसहित सेता जाति भएको पोलिश नागरिकको जन्म टाचिमा भएको उनको जन्म सहरमा भएको थियो जहाँ उहाँ हुर्कनुभयो र उनका एक मात्र भाई र भाई - लुकाज मिलिक पनि भनिन्थ्यो।
टाईचीको ब्लाक "एन" छेवैमा हुर्केका, जवान मिलिक तीन वर्षको थिए जब उसले आफ्नो अभिभावकको घरको कुनामा वरपरको साथीमा साथीहरू र छिमेकीहरूसँग फुटबल खेल्न सुरु गरे। यो ध्यान दिनको लागि पर्याप्त छ कि युवा फुटबल उत्साहीको लागि जीवन राम्रो थियो जसको आफ्नो जीवनमा बुबाको संख्या थियो his औं बर्षसम्म उनको जन्मदिन।
अर्काडियोस मिलिकले आफ्नो 5th औं जन्मदिनको अवसरमा चित्रण गरे। छवि क्रेडिट: FPCP।
अर्काडियस मिल्क बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
मिलिकका बुबाले family बर्षको उमेरमा परिवार छोडे र यसरी उनको जीवनशैलीमा बिरोध गर्न थाले। कोमल उमेरको केटाले खराब केटाहरूको संगठित गर्न शुरू गर्यो जसले उहाँलाई धूम्रपान, सानो चोरीमा संलग्न हुने र धेरै राति घर फर्कने तरिका सिकाउँथ्यो। आफ्नो छोराको नैतिक कम्पासको दिशामा भएको द्रुत परिवर्तनबाट विचलित, मिलिककी आमाले उनको छिमेकी - स्लेवक "मोकी" मोगिलानको सहायता लिइन् जसले मिलिकलाई उनको होशमा फर्काउन मद्दत गरे।
कोचीaching महत्वाकांक्षाका साथ रोज्वज क्याटोइस फुटबल क्लबको फुटबल खेलाडी मोकीले मिलिकलाई उनको मार्गनिर्देशनको साथसाथै एक साथी र बुबा पनि बनाए। यो मोकीले पनि मिलिकको फुटबलमा हुने सम्भावना देखेका थिए र रोज्वज काटोइसिसको युवा प्रणालीमा उनको प्रशिक्षण वा करियर निर्माणमा सहयोग पुर्‍याए।
अर्काडीउज मिलिकले आफ्नो प्रशिक्षक, साथी र बुब्रे स्लाभेक मोकी मोगिलानसँग चित्रण गरे। छवि क्रेडिट: FPCP।
अर्काडियस मिल्क बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - प्रारम्भिक क्यारियर जीवन
रोज्वज क्याटोइस युवा प्रणालीमा, मिल्क बिस्तारै क्रमशः उन्मुख भए र बलमा आफ्नो देब्रे खुट्टाको क्षमताको लागि अन्य खेलाडीहरूको बीचमा बाहिर खडा भए। यसका अतिरिक्त उसले धेरै पासहरू र सहायकहरू पनि प्राप्त गर्‍यो किनभने उनका टीमका साथीहरूले उनलाई विश्वास गर्थे - कुनै पनि खेलाडी भन्दा बढी - बलको साथ धेरै उपयोगी चीज गर्न।
राइकहरूको माध्यमबाट राइजिंग: मिलिक प्रायः बल पास हुन्छ किनभने उसको टीमका साथीहरूले उनलाई छुटकारामा विश्वास गर्दछन्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम र खेलकुद
२०० – -१० सत्रमा मिलिकलाई रोज्ज क्याटोइस रिजर्भ टोलीसँग परिचित गराइयो र धेरै समय पछि के एस क्रासिज्युको बिरुद्ध victory-०को जीतमा दुई गोलको योगदान दिएर क्लबका लागि उत्कृष्ट III लीगा डेब्यू गरे। सिजनको अन्त्यमा, मिलिकको टोटेनहम र रिडिंग लगायत उनको हस्ताक्षर खोज्ने ठूला क्लबहरू थिए। यद्यपि उनले पोलिश क्लब गार्निक जबरजेका लागि खेल्ने छनोट गरे जहाँ उनी लगातार गोल स्कोरर भए।
अर्काडियस मिल्क बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - सडकमा फेम स्टोरी
यो बढ्दो प्रतिष्ठा र राम्रो प्रदर्शनको साथ मिलिकले २०१२ मा बुन्देस्लिगा पावरहाउस बायर लेभरकुसेनको लागि कदम चालेको थियो। यद्यपि उनी जर्मन क्लबमा खेल्ने कम अवसरको चुनौतीबाट विचलित भए जसले पछि उसलाई एफसी ओग्सबर्गमा loanण दिए।
यद्यपि एफ सी अग्सबर्ग एक मिल्दोजुल्दो टोली थिए मिल्िकको आगमनको समयमा, उनी क्लबमा जे भए पनि खुसी थिए किनभने यसले आफ्नो खेलको थप आवश्यकतालाई सन्तुष्ट तुल्यायो। मिलिकले क्लबलाई २०१––२०१ season सिजन 2013th स्थानमा समाप्त गरेर मद्दत गरेर एफसी ओग्सबर्गको कृपा फिर्ता गरे, यो एउटा उपलब्धि हो कि धेरै समयदेखि जर्मन पक्षले रेकर्ड गरेको थिएन।
एफसी ओग्सबर्गमा, मिलिक अधिक प्लेटाइम पाउँदा खुसी थिए, एक लग्जरीमा उनी बेयर लेभरकुसेनमा अस्वीकृत भए। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
अर्काडियस मिल्क बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
२०१ 2014 मा, बायर लेवरकुसेनले मिलिकलाई एजेक्सलाई edण दिए जहाँ उनी अत्यन्त प्रभावित भए र डच राक्षसहरूले उनलाई स्थायी सम्झौता प्रस्ताव गरे। एजेक्समा आफ्नो सफलताको चरम सीमामा, मिलिक इटालियन क्लब - नेपोलीमा सामेल हुनुभन्दा पहिले उनी एरेडिभीसीका शीर्ष गोलकर्ताहरूमध्ये एक बने।
मिलिक लेख्नको समयमा छिटो अगाडि मिल्कि vers एक बहुमुखी र राम्रो गोलाकार बायाँ खुट्टे अगाडि हो जुन नेपोली र उसको पोलिश राष्ट्रिय टीमको लागि अपरिहार्य छ। बढी के? उनी बर्ष राम्रो हुँदै जान्छ र आफ्नो महान देशवासीको तुलनामा कमाएको छ - रबर्ट लुवेन्डोस्की। बाँकी तिनीहरू इतिहास हो।
आर्काडियाउज मिलिक दुबै आफ्नो क्लब र देशका लागि अपरिहार्य छ। छवि क्रेडिट: गोल।
अर्काडियस मिल्क बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - सम्बन्धी जीवन तथ्यहरू
मिल्कको आकर्षक क्यारियर जीवनबाट टाढा, उसले आफ्नो ईर्ष्यालु प्रेम जीवनमा गुणस्तरीय समय खर्च गर्दछ। यो आफ्नो प्रेमिका जेसिका जिओलेकसँग प्लेमेकरको years वर्षको सुखी सम्बन्धमा धेरै प्रस्ट देखिन्छ। २०१7मा भेटिएको र डेटि The गर्ने प्रेमबर्डहरू इटेलियन फुटबलमा उनीहरूको सही खेलबाट टाढा नहुने कारणका लागि आँखा चिम्लेर रहेछन्।
अर्काडीउज मिलिक आफ्नो भव्य प्रेमिका जेसिका जिओलेकसँग, छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
जेसिका एक मोडल र फेशन ब्लगर हो जुन इन्स्टाग्राममा उत्कृष्ट फलोइमको साथ छ। उनको प्रेमीलाई जस्तै, जेसिका छोरा (छोरी) वा छोरी (हरू) लाई विवाहबाट बाहिर भएको थाहा छैन। Lovebirds इटालियन प्रशंसकहरु संग धेरै माया गरिन्छ जो नजीकको भविष्यमा उनीहरुलाई पति र पत्नी बन्न को लागी प्रतीक्षा गर्न सक्दैन।
अर्काडियस मिल्क बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - पारिवारिक जीवन तथ्य
यो एक मायालु र सहयोगी परिवार लिन्छ एक फुटबल प्रतिभा बढाउन को लागी र Milik भाग्यशाली छ एक द्वारा आशिष् भएको छ। हामी तपाइँलाई प्लेमेकरको पारिवारिक पृष्ठभूमिका बारे तथ्यका साथै तिनका पुर्खाहरूको बारेमा तथ्या facts्कहरू ल्याउँछौं।
अर्काडियाउज मिलिकका बुबाको बारेमा: मिल्कलाई आफ्नो बुबाको बारेमा केहि सम्झना छैन किनभने उहाँ अझै जवान हुनुहुन्थ्यो जब सानो चिनिएका बुबाले घर छोडे। यद्यपि, मिलिकलाई माया गर्नेहरू सम्झन्छन् कि एक पटकका बुबा व्यक्तित्वले उनलाई एकपटक फल्कन टाची खेलमा एक बर्षे उमेरको अवलोकन गर्न लगेको थियो। प्लेमेकरलाई यो पनि सूचित गरिएको थियो कि उनका बुवाले पिउने समस्याहरू छन् जसले उनको परिवारबाट बाहिर निस्केर आएको छ।
अर्काडियोस मिलिककी आमाको बारेमा: यद्यपि मिल्किकी आमाको बारेमा धेरै ज्ञात छैन तर उनलाई स्लेवक “मोकी” मोगिलानको देखभालमा हस्तान्तरण गरिएको छ जसले उनको ज्यादतीलाई रोक्छ र उसलाई फुटबलको सम्मानजनक मार्गमा डो .्याउँदछ। यो भन्ने बिना नै कि अगाडीले उनको आमासँग घनिष्ठ बन्धन साझेदारी गर्छिन् किनकि उनले रोज्वज काटोइसिसको विकासको क्रममा सहयोगी भूमिका खेल्छन्।
यो बायो लेख्ने क्रममा अर्काडियोस मिलिकले आफ्ना अभिभावकको फोटोहरू खुलाउन सकेका छैनन्। छवि क्रेडिट: क्लिपआर्ट्स लाइब्रेरी र विकिमेडिया।
अर्काडियाउज मिलिकका भाई बहिनीहरूको बारेमा: अर्काडियस मिल्कको कुनै बहिनी छैन तर उसको जेठो भाई लुकास मिलिक भनेर चिनिन्छ। लुकाज चाँडो नै मिलिकको सहयोगी खाँबा थिए जब उनले आफ्नो चासोलाई हेरचाह गर्न मद्दत गरे। जेठो भाई लेखनको समय हो - गार्निक जाब्र्जेका कर्मचारी हुन् जहाँ उनले कोचिंग कार्य गर्दछ र युवाहरूलाई मिल्कि जस्तो हुन प्रेरणा दिन्छ।
आफ्नो जेठो भाई लुकास मिल्लिकसँग अर्काडियोस मिलिकको दुर्लभ फोटो। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
अर्काडियाउज मिलिकका आफन्तहरूको बारेमा: मिलिकको निकट पारिवारिक जीवनबाट टाढा, उहाँकी आमाबुवा हजुरआमा र बुवा हजुरआमा र हजुरआमाको बारेमा धेरै थाहा छैन। त्यस्तै गरी, प्लेमेकर्सका काका, काकी र काकाको कुनै रेकर्ड छैन जबकि उनका भतिजा र भतिजाहरू यो जीवनी लेख्दा लेखिएको समयमा चिनिन सकेका छैनन्।
अर्काडियस मिल्क बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - व्यक्तिगत जीवन तथ्य
यो कुनै लाभ छैन कि अर्काडियाउज मिलिक मीनको उत्तम मूर्त रूप हो उनको व्यक्तित्वको दर्पणको रूपमा व्यक्तित्व व्यक्तित्वले दर्शाएको व्यक्ति जुन व्यक्ति राशी चिन्हले निर्देशित छन्।
ऊ भावनात्मक हिसाबले धुनमा आउँछ, प्रेरित, लचिलो, राम्रो छ र उसको निजी र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा विवरण खुलाउन कुनै समस्या छैन। मिलिकको चासो र रुचिहरू बोल्छ उसलाई यात्रा गर्न, छिटो डु boats्गा चलाउन, पौडी खेल्न, बास्केटबल खेल संगै राख्न र आफ्नो साथीहरु र परिवार संग समय खर्च गर्न।
अर्काडियस मिल्कलाई वेगको डु boats्गा चढ्न मन पर्छ। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
अर्काडियस मिल्क बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - जीवन शैली तथ्य
अर्काडियोस मिलिकको अनुमानित कुल सम्पत्ति $ 3.8 मिलियन डलरको साथै उनको ठूलो तलब र मजदूरी - लेख्ने समयमा - फुटबलको आकर्षक सम्भावनाको बारेमा राम्रो बोल्छ र किन खेलका शीर्ष कमाईहरूले विलासी जीवन शैली बिताउन ठूलो खर्च गर्छन् भनेर वर्णन गर्दछ।
रणनीतिक स्ट्राइकर वरिपरि लक्जरी चिच्याउने सम्पत्तिमा नेपल्स, क्याम्पानियामा लक्जरी हवेली साथै अडी, मर्सिडीज जस्ता ब्रान्डले उत्पादित कारको एक विदेशी फ्लीट समावेश गर्दछ।
अर्काडियाउज मिलिक आफ्नो विलासी मर्सिडीज कारमा यात्रा गर्दै। छवि क्रेडिट: WTFoot।
अर्काडियस मिल्क बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - अनियमित तथ्यहरू
हामीले यसलाई अर्काडियाउज मिल्लिकको बाल्यकालको कथनमा बेर्ने कल गर्नु अघि, तपाईंलाई उहाँको बारेमा अझ बढी जान्न मद्दत गर्न यहाँ कम-ज्ञात वा अनकही तथ्यहरू छन्।
धर्म: मिल्कको धर्म लेख्ने समयमा अज्ञात छ किनकि उनले आफ्नो विश्वासलाई दर्साउने सूचकहरू साक्षात्कार मार्फत वा तीन लोकप्रिय सोशल मिडिया ह्यान्डलहरू मार्फत दिएका छैनन्।
ट्याटूहरू: ट्याटूहरू लेख्ने समयमा मिलिकको चिन्ताको सब भन्दा कम चिन्ता हुन्। बरु नियमित व्यायामको माध्यमबाट उनी आफ्नो शरीर सुधार गर्नमा केन्द्रित छन्। वास्तवमा, आफ्नो १.1.86 मिटरको उचाईमा मास्कुलर निर्माणले डिफेन्डर्सलाई उनीसँग डग्न डराउनेछ।
आर्काडियाउज मिलिकसँग लेख्ने समयमा कुनै ट्याटू छैन। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
धुम्रपान र मदिरा: यद्यपि मिलिक आफ्नो प्रारम्भिक जीवनमा छोटो अवधिको लागि धूम्रपान र मद्यपानमा ठूलो थिए, तर उनले स्लावेक "मोकी" मोगिलान पछि उनको बानीमा लात लिए। मिल्क लेख्नको समय भन्दा छिटो अगाडि मिलिक पुन: दुर्घटना भएको छैन र उसको स्वास्थ्यमा सम्झौता गर्न केहि पनि गर्दैन।
मात्र फुटबल: के तपाईंलाई थाहा छ अर्काडियोस मिलिकसँग फूड एंड बल भनिने रेस्टुरेन्ट छ? यो क्याटोविस, पोल्याण्डको लाइबेरो शपिंग मल्लमा अवस्थित छ। शीर्ष-रेटेड रेस्टुरेन्टले केवल पाइनर जुनूनको संसारमा संरक्षकहरूको परिचय गर्दैन तर उनीहरूलाई खेल भावनाहरू पनि दिन्छ।
अर्काडियस मिल्कको फोटो उसको रेस्टुरेन्टमा। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो अर्काडियस मिल्क चाइल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
परिमार्जित मिति: अप्रिल २ 4, २०२०
परिमार्जित मिति: अप्रिल २ 19, २०२०